Manohy manafay ny vaovao antserasera ny governemanta Zimbaboe mba hifehezana ny fisantaran’andraikitry ny olom-pirenena · Global Voices teny Malagasy
Niainga tany amin'ny politikam-panjanahantany ny fifehezana media ao Zimbabwe
Voadika ny 16 Oktobra 2019 6:09 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Swahili, srpski, Ελληνικά, English
Mpanao fihetsiketsehana mangataka ny fanesorana ny filoha Robert Mugabe (izay efa maty) eo amin'ny fahefana tamin'ny 18 Novambra 2017. Sary avy amin'ny mpampiasa Flickr Zimbabwean-eyes (azon'ny rehetra ampiasaina).
Ny maraimben'ny 15 Novambra 2017, nifoha tamin'ny vaovao farany ny Zimbaboeanina fa voahongana tamin'ny fanonganam-panjakana ny lehilahy mahery, Robert Mugabe izay efa maty, ary nogadraina tamin'ny trano ambenana niaraka tamin'ny fianakaviany tao amin'ny fonenam-panjakana, State House. .
Nanambara tamin'ny fahitalavi-panjakana ny jeneraly Sibusiso Moyo, minisitry ny raharaham-bahiny ankehitriny fa voaaro eo ambanin'ny fiambenan'ny fanjakana ny filoha ary “nifindra tamin'ny ambaratonga hafa ny toe-draharaha.”
Saika teo no ho eo taorian'ny fanambaràn'ny jeneraly Moyo, dia niditra media sosialy tamim-pahavitrihana ny Zimbaboeana — indrindra tao amin'ny WhatsApp, Twitter ary Facebook — mba hahazoana vaovao farany momba ny toe-draharaha. Sambany namaka tao amin'ny Zimbaboeanina ny lazan'ny media sosialy hahazoana vaovao sy hanetsehana fihetsiketsehana, reheha nidina an-dalambe ireo mpanao fihetsiketsehana ary nanampy nanongana an'i Mugabe hiala amin'ny toerany.
Nahatsikaritra ny herin'ny media sosialy ny governemanta vaovao, tarihan'i Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Amin'ny maha minisitry ny fiarovam-panjakana azy teo aloha, nahita ihany koa ny lanja sy ny sandan'ny fandisoam-baovao eo amin'ny sehatra ara-politika ao Zimbaboe i Mnangagwa.
Tamin'ny fihetsika voakajy mba hanamafisana ny fahefana ara-politika vaovao sy hiantohana ny fandresena amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavambahoaka amin'ny taona ho avy, nanome torolalana ho an'ny ligin'ny tanora ao amin'ny antoko mitondra ZANU PF (Zimbabwe African National Union-Patriotic Front) i Mnangagwa mba hiditra media sosialy” sy habaka antserasera ary handresy ny mpifanandrina,” tamin'ny volana martsa 2018.
Tao Zimbabwe taorian'i Mugabe, nahalalina ny krizin'ny vaovao diso sy fandisoana vaovao izany, nahatonga ireo Zimbaboeanina sahirana hahazo loharanom-baovao azo antoka sy marina momba ny tetezamitan'ny firenena sy ny hetsi-panoherana ny governemanta.
Raha nitabataba “vaovao faikany” mifandraika amin'ny vaovao rehetra mivezivezy amin'ny media sosialy ny governemanta vaovao, izay hitan'izy ireo fa manohintohina ny toeran'ny firenena, dia nametraka tetikady koa izy ireo mba hamitahana ny vahoaka momba ny fitantanany ny hetsi-panoherana ny governemanta.
Ny fanapoizinana ny fahalalaham-pitenenana antserasera
Nahitana fiakarana lehibe ny teo amin'ny fampiasana ny aterineto finday sy ny media sosialy i Zimbaboe tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa. Nitombo 41,1 isanjato niainga avy amin'ny 11 isanjaton'ny mponina nankany amin'ny 52,1 isanjato ny tahan'ny fidirana amin'ny aterineto teo anelanelan'ny taona 2010 sy 2018, raha nitombo 43,8 isanjato, niainga avy amin'ny 58,8 isanjato nankany amin'ny 102,7 isanjato kosa ny fidirana amin'ny finday nandritra izany fotoana izany ihany. Midika izany fa miditra aterineto ny atsasaky ny mponina raha oharina tamin'ny 11 isan-jato monja tamin'ny taona 2010.
Na izany aza, nanjaka tanteraka ny vaovao diso noho ny antony maro samihafa: ny fisaraham-bazana tanteraka teo amin'ny fampitam-baovao, ny fifehezan'ny governemanta ny fampitam-baovao, ny fomba fifandraisana ofisialy ratsy ary ny tsy fahaizana mikirakira aterineto eo amin'ireo mpisera aterineto.
Nandritra ny fihetsiketsehana manohitra ny governemanta tamin'ny Janoary 2019, raha nisambotra sy nidaroka mpanao fihetsiketsehana an-jatony ny mpitandro ny filaminana, nifaninana tamin'ny filazan'ny governemanta fa “vaovao faikany” ao anatin'ny fandavany tanteraka ny vaovaon'ireo famoretana ireo. Noferan'ny governemanta ny fidirana amin'ny tolotra aterineto mba hanapahana ny fivezivezen'ny vaovao sy hampisy fisavoritahana bebe kokoa. Nampiasa vaovao diso momba ny hetsi-panoherana ihany koa izy ireo sy ny mpanohana azy ireo ary naratsiana ho “vaovao faikany” ny vaovao marina na tatitra marina.
Matetika raisin'ny olom-pirenena any Zimbaboe ho politika ofisialy ny fanambarana ankapobeny avoakan'ny minisitry ny governemanta. Ohatra, nikasa handresy lahatra ny vahoaka ny Minisitra lefitry ny angovo, Mutodi fa ara-dalàna ny zava-drehetra ary asan'ireo “olom-bitsy” ny lahatsary sy ny sarin'ny miaramila manao fisafoana eny an-dalana. Mbola namitaka ny firenena ihany i Mutodi raha nilaza tamin'ny fahitalavi-panjakana fa tsy nisy ny fanakatonana aterineto fa ” mivangongo” fotsiny ny tambajotra.
Tamin'ny tranga iray hafa ahiana fandisoam-baovao ankatoavin'ny governemanta, olona an-tapitrisany no nijanona tsy afaka niditra media sosialy nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny volana Janoary. Ny hafa nitroka ny fampiharana Virtual Private Network (VPN) mba hahazoana vaovao, saingy niparitaka ny hafatra fa mety hiteraka fisamborana ny fitrohana ny fampiharana, ka lasa miteraka tahotra bebe kokoa.
Rehefa tamin'ny martsa 2019, nisioka tatitra manameloka ny fampiasan'ny governemanta “herisetra mahatsiravina” nandritra ny fihetsiketsehana volana Janoary 2019 ny Mpanaramaso ny Zon'olombelona (HRW), niditra Twitter koa ireo mpanohana ny fitondrana mba hanaratsy sy hanafika ny HRW.
Nisioka ny mpisera iray fa “manaparitaka lainga bevava” ny fikambanana ary namariparitra ny HRW ho “fikambanana neo-kolonialy… karamaina hanaratsy ireo firenena tsy manan-tsiny mba hanosehana ny tanjona fiamboniana Amerikanina.” Nisy hafa koa namerina ako ny filazan'ny fitondrana ary nanome tsiny ny herisetra tamin'ny “singa vitsy.izay miezaka manimba ny endriky ny filoham-pirenena. “
Ary nitohy hatrany ankoatra ny fihetsiketsehana volana Janoary ny fampielezana vaovao diso momba ny politikam-panjakana sy ireo hetsika hafa mahaliana ny vahoaka.
Vao haingana, niditra Twitter ireo mpikambana ao amin'ny antoko ZANU PF mba hamitaka ny vahoaka momba ny fanjavonan'i Dr. Peter Magombey, filohan'ny fikambanan'ny mpitsabo eny amin'ny hopitaly any Zimbabwe (ZHDA amin'ny teny Anglisy). Nisy naka an-keriny tamin'ny 14 septambra 2019 izy, taorian'ny fampahafantarana fitokonana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana. Nofaritan'ny sekreteran'ny ZANU PF eo amin'ny resaka tanora ho “mpampihomehy” sy henatra ho an'ny mpiray asa i Magombey. Nilaza ny kaonty amin'ny anarana ZANU PF Tia Tanindrazana fa “faikany” ny vaovao mikasika ny fisamborana azy. Ny hafa indray nanaparitaka filazana lainga fa “namono marary marobe” ireo dokotera noho ny fitokonana, anisan'izany ireo olona maherin'ny 500 any amin'ny hopitaly iray.
Ankamantatra manatantara ao Zimbaboe
Nipoitra tamin'ny politika fanjanahana tamin'ny taonjato faha-20 ny fifehezana ny fampitam-baovao any Zimbaboe, izay feno fisolelahana tafahoatra tamin'ny fahefana politika. Nosokajian'ny governemanta Rhodeziana notarihan'i Ian Smith ho toy ny “fitaovam-piadiana nosafidiana ny propagandy sy ny fifehezana ny vaovao, mba tsy hanohanana ny maha ara-dalànan'ny fitondrana ihany fa koa mba hanaparitahana vaovao diso momba ny ady.
Nandany lalàna marobe ny governemanta kolonialy mba hanakanana ny fahalalaham-pitenena na ireo mpanohitra ny politika fanavakavaham-bolonkoditra an'i Smith ary nampihatra ireo lalàna ireo tamin'ny fomba feno herisetra mba hikendrena ireo mpitarika tolom-panafahana. Fenitra ny fanakanana ny vaovao na dia talohan'ny fahaleovantenany tamin'ny taona 1980 aza, ary izany no nametraka ny feon'ny governemanta eo amin'ny lafiny politikan'ny serasera sy ny fitantanana ny media nandritra ny taona maro ho avy.
Araka ny nosoratan'ilay mpanao gazety sady mpanoratra malaza Afrikanina tatsimo efa maty, Heidi Holland, tao amin'ny tantaram-piainany “Sakafo hariva miaraka amin'i Mugabe: Ny Tantara tsy Nolazaina momba ilay Mpitolona ho an'ny Fahalalahana lasa Mpanao didy Jadona“:
So many in ZANU PF's hierarchy have lived with similar appalling violence woven into everyday life as if it were normal. The bush war, or Second Chimurenga, has never really ended in Zimbabwe.
Betsaka ao amin'ny ambaratongan'ny ZANU PF no niaina herisetra mahatsiravina tahaka izany tao anatin'ny fiainana andavanandro satria ara-dalàna izany. Tsy mbola nifarana mihitsy any Zimbaboe ny ady anaty akata, na ny Chimurenga faharoa.
Manohy ity lova ity i Mnangagwa ankehitriny, manafoana ireo feo mitsikera amin'ny alàlan'ny tetikady fandisoana vaovao sy fanakatonana aterineto.
Ity lahatsoratra ity dia anisan'ny andiana lahatsoratra manadihady ny fitsabahana ny zo nomerika amin'ny alalan'ny fomba tahaka ny fanakatonana ny tambajotra sy ny fandisoana vaovao mandritra ny hetsika ara-politika goavana ao amin'ny firenena Afrikanina fito: Alzeria, Ethiopia, Mozambika, Nizeria, Tonizia, Oganda, ary Zimbaboe. Ny Africa Digital Rights Fund ao amin'ny The Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa (CIPESA) no mamatsy vola ny tetikasa.